20 février 2018 | déliremadagascar
Archives journalières 20 février 2018
“TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS” U14 GRADE II : Hampiakatra isa no tanjona
Sambany no nikarakara “tournoi international”, sokajy U14 Grade II ny federasiona Malagasy ny lalao “Tennis” (FTM). Hanomboka rahampitso 21 febroary 2018 ny lalao. Continuer la lecture →
Nametraka Antonta-taratasy teny amin’ny fitsarana Anosy afak’omaly Alatsinainy 19 Febroary 2018 ny mpisolo vavan’ny fiangoanna METM Zoara Famonjena Antohomadinika. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 février 2018 lynda
BOKY FAMARANANA NY FIANARANA: Hita hanaovana kolikoly
Misy amin’ireo mpianatra ambaratonga ambony no tsy izy ireo no manao ny boky famaranana ny fianarany fa olon-kafa. Raha ny tranga efa hita, ny “encadreur” ihany no mamita ny boky hatramin’ny farany. Continuer la lecture →
KAOMININA AMBANIVOHITRA: Mila mahay “comptable” raha te ho Ben’ny Tanana
Niova ny fomba fitantanam-bolan’ny kaominina. Ny Ministeran’ny vola sy ny fitantanam-bola indray no manendry ny mpitantam-bolan’ny kaominina kanefa ny kaominina ihany no mandoa ny karamany . Continuer la lecture →
GSDM: Ampianarina any an-tsekoly ny “agro-écologie”.
Sekolim-panjakana ambaratonga faharoa (CEG) miisa enina ao amin’ny distrikan’i Vakinakaratra no nanombohana tetikasa PAPAM (Projet d’Appui à l’Amélioration de la Production Agricole). Noho ny fiarahamiasan’ny GSDM, vovonana matihanina amin’ny fampiasana ny “agro-écologie”, nampidirina ho an’isan’ny taranja ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny teknika fambolena maharitra. Continuer la lecture →
AGRISUD INTERNATIONAL: Azo atao ny mamerina ny tsiron’ny tany.
Fianakaviana 5100 ao amin’ny faritra Itasy mampiasa ny teknika famerenana indray ny tsiron’ny tany. Vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana, tsy mamokatra firy intsony ny tany. Hany ka mihena ny vokatra miakatra. Ho fanampiana ireo tantsaha mpamboly, nitohy ny tetikasa MAHAVOTRA ( MAmboly HAzo sy VOankazo ho antoky ny Tontolo RAhampitso ) izay iantsorohan’ny “Agrisud International”. “Miditra amin’ny tetikasa Mahavotra faharoa isika izao. Continuer la lecture →